Koorsada Shahaadada Sayniska Warshadaha ee Hindiya | Waa maxay sababta Sayniska xogta? «ITS
Waa maxay koorsada sayniska?
Falanqaynta markaad ka qaadaneyso Barnaamijka Sayniska Warfaafinta
Sayniska xogta ee Hindiya
Tallaabo Talaabo talaabo ah oo lagu baranayo:
Meesha laga barto:
Sayniska xogta loo yaqaan "Data Science" waa tareen ay ku jirto farsamooyinka macquulka ah iyo nidaam si loo soo saaro macluumaad qiimo leh oo laga helo macluumaadka. Macluumaadka la soo saaray waa la qaabeyn karaa ama aan la nidaamin. Waxaa jira koorsooyin kala duwan oo hoos yimaada Sayniska Warbixinta. Waxaad na siisaa fursad aad ku fahamto sida aad u soo qaadato kooras kugu habboon.
Ogow khibradaada: Aasaaskaaga waa inaad tixgelisaa inta aadan dooran barnaamijka. Haddii aan la helin waxbarashada aasaasiga ah iyo awooda goobta, ma laguugu ogolaan doono mid ka mid ah koorsooyinka. Inta badan ururada waxay ku taxan yihiin waxyaabaha lagama maarmaanka u ah inay ku biiraan Koorsooyinka Shahaadada Sayniska. Furi goobta qaybta si aad u hubiso in khibradaagu isku duwo shuruudaha.
Aqoonsiga ujeedooyinkaaga: Ka hor inta aanad dooran koorsada, waxaad fahamsan tahay ujeedooyinkaaga ama waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad barato. Sayniska macluumaadku wuxuu leeyahay kala duwanaansho fara badan oo aad u baahan tahay inaad soo qaadato midka aad adigu rabto. Barnaamijka aad rabto inaad ku biirto waa inuu kaa caawiyaa fahamka ujeedooyinkaaga qof ahaan. Qofna maahan, laakiin tani waxay kugu hogaamin kartaa talaabada aad ku gaartay gobolkaaga.
Waxaad leedahay laba ikhtiyaar oo ku saabsan sida loo barto. Mid ka mid ah waa kala goynta meesha ay tahay in aad bixiso lacag kaash ah oo mid kale ay ku biirto kulliyado waaweyn oo leh jajab wanaagsan. Xaaladda is-barashada, waxaad u baahan tahay waxyaabo aad u sarreeya si aad u dhameysato koorsada halka koleejyada ay ku takhasusaan inay ku hagaan. Waad dooran kartaa sida lagu caddeeyey heerkaaga xalka.
Haddii aad dooratay websaydh ku salaysan waxbarasho ama ku biirida kulliyad, ka soo qaadashada ururada saxda ah waa lagama maarmaan u ah horumarkaaga. Waxaad ka heli kartaa jaan-qaadayaasha ka soo jeeda asxaabyahaan si rasmi ah u qaatay koorsada. Marka aad fursad u haysato inaad ku biirto koorsada caadiga ah, marka hore dooro meesha ay tahay in ay noqoto. Haddii ay dhacdo in aadan kaaga gaarin kooraska sayniska sayniska ee Hindiya, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah kulliyadaha ugu fiican ee ka baxsan dalka. Solutions Technologies Innovative wuxuu bixiyaa Tababarka Shaqaalaha iyo Tababarka Shakhsiyeed ee Gurgaon, Delhi, Banglore, Noida, Hindiya iyo sidoo kale dalalka kale sida USA, UK iyo Australia.
Nin raba inuu qaato koorso caadi ahaan waa loo qaddimay qiyaas aad u badan. Isbarbardhiga kor ku xusan wuxuu kaa caawinayaa inaad doorato shahaadada macluumaadka sayniska ee aad uqalantay.